Archive du 03-mai-2021
Baolina kitra Malagasy Fa iza marina moa i Eric Rabesandratana ?
Nanaiky ny fanesorana azy ny mpanazatra ny Barea Atoa Nicolas Dupuis, ary efa nanaiky andraikiny vaovao ihany koa
Saino tsara izay lazaina e !
Herintaona manodidina ny 700 eo ny maty teto amintsika. Any Brésil 4000 isan’andro ny maty, any Inde 3000 isan’andro, hoy ny Filoham-pirenena.
Fanabeazana Miverina an-tsekoly ireo hiatrika fanadinam-panjakana
Mitovitovy tamin’ny zava-nisy herintaona lasa izay no mitranga eo amin’ny sehatry ny fampianarana.
Rolly Mercia sy Vonison Andrianjato Tsy hamelan’ny Fanjakana hatramin’ny farany
Tokony ho ao anatin’ny fifanajana ny asa fanaovan-gazety, ary ny zavatra marina no ambara, hoy I Andry Rajoelina omaly.
Tsenabarom-panjakana 1,4 miliara Ar Misy tan-dapa voatonontonona amina hosoka
Tan-dapa iray eo anivon’ny Fiadidian’ny Repoblika no voatonontonona amina tsenabarom-panjakana tsy mangarahara.
Mitohy 15 andro ny fahamehana Niakatra ho 6 ny faritra mikatona tanteraka
Rehefa nifandinika tamin’ireo filohana andrim-panjakana, dia nahatsapa, fa mila tohizana ny ezaka,
Andry Rajoelina “Olona voafantina no hatao vaksiny fa tsy ny rehetra”
Amin’ny 07 mey no ho tonga ny vaksiny andiany voalohany. Efa nisy karazana vaksiny tapaka niarahana tamin’ny Akademiam-pirenena momba ny fitsaboana,
Randrambao sendikaly “Mitohy ny tolona, hatambaro ny hery”
Nanao fanambarana ho fanamarihana ny andro iraisam-pirenena momba ny asa tetsy Anosy ny faran’ny herinandro teo ny Randrambao
Afomanga vao maraina teny Mahamasina Nahazo fampitandremana mafy ireo Sinoa
Nanaitra ny fisiana afomanga tao Mahamasina omaly nataon’ireo sinoa mpanamboatra ny kianja na tsy dia nahoraka aza.
Andry Rabesaotra “Ny baolina kitra dia mijanona ho baolina kitra ary fanatanjahantena”
Lasa resa-be sy adihevitra tanteraka ety amin'ny tambazotran-tserasera ilay fampiatona amin'ny asany ny mpanazatra ny ekipam-pirenena Malagasy Nicolas Dupuis.
Anjomakely Naolana avy eo natsatoka tao amin’ny WC ilay ramatoa be
Ramatoa lehibe iray manodidina ny 60 taona no maty naolan’olon-tsy fantatra sy natsatoky tao amin’ny trano fivoahana ny lohany teny Anjomakely,
Orinasa mpitsabo Malagasy FITRAMA Hitety faritra hitsabo maimaimpoana ny mpiray tanindrazana
Hitety faritra hitsabo ny mpiray tanindrazana maimaimpoana ny orinasa mpitsabo Malagasy FITRAMA,
Eric Rabesandratana Efa manomana ny paikady vaovao
I Eric Rabesandratana no voatendry ho mpanazatra vonjimaikan’ny Barean’i Madagasikara mandra-pisian’ny toromarika vaovao.
Barean’i Madagasikara Naato i Nicolas Dupuis
Nivoaka ny zoma lasa teo ny taratasy ofisialy avy amin'ny Federasionina Malagasin'ny Baolina kitra (FMF),
Analavory sy Ampefy Kofona ny sehatry ny fizahantany
Faritra isan’ny mahasarika ny mpizahantany Malagasy sy vahiny i Itasy, amin’ny fananany toeram-pitsangantsanganana maro amin’ireo Distrika telo mandrafitra azy.